xuutiyiinta oo xayirey Shaqaalaha UN – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA xuutiyiinta oo xayirey Shaqaalaha UN
Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ayaa ka hor istaagay kooxda UN-ka ee uu hogaamiyo General Hindi Abhijit Goha axadii inay ka baxaan xaruntooda markabka oo ku xayirma badda isla markaana ka hor istaagay inay u dhaqaaqaan goobta kulanka si ay u dhammaystiraan fulinta howlgalka saraakiisha isku xidhka bariga magaalada Hodeidah ee galbeedka Ye
Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ayaa ka hor istaagay kooxda UN-ka inay u guuraan goobta kulanka si ay u fuliyaan heshiiska la qorsheeyay ee ah in la geeyo saraakiisha xiriirinta aagagga burcad-badeedda, militariga ayaa lagu sheegay hadal kooban.
Wuxuu xaqiijiyay soo celinta General General Abhijit Guha ee India iyo kooxda UN-ka inay saaran yihiin kadib marki maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ay ka hor istaageen dhaqdhaqaaqooda goobta kulanka.
Sida laga soo xigtay ilo gudaha ah, malleeshiyada Xuuthiyiinta ayaa la geeyay Axadda horteeda markabka caalamiga ah ee ku xayiran Badda Cas, waxayna xaddiday dhaqdhaqaaqa kooxda UN-ka, waxayna ka hor istaageen inay u guuraan goobta kulanka si ay u geeyaan saraakiil xiriiriyayaal ah goobta labaad ee indha indheeynta ee magaalada Saleh fulinta fulinta heshiiskii dhex maray labada dhinac.
Waxay tilmaamtay jiritaanka kooxda isku dhafka ah ee goobta kulanka ilaa iyo aroortii hore ee subaxnimadii, halka maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ay ka hor istaageen kooxda Qaramada Midoobay inay ka soo daad-gureeyaan markabka caalamiga ah una guuraan goobta kulanka lagu heshiiyay.
“Waxa maanta ku dhacay maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ah joogitaankooda rag hubaysan horteeda markabka UN-ka isla markaana ka hortagay kooxdii ka soo qeybgashay kulanka kulanka sidii la isku waafaqay, wuxuu cadeynayaa dhaqankooda ka soo horjeedda nabadda,” ayuu yiri Galbeedka Sadeq oo xubin ka ah Taliska Wadajirka ee Xeebta Galbeed. Ujeedadooda jinni ayaa sii wadaysa diidmada diidmada heshiisyada.
Ka-hortagga kooxda UN-ka inay sii waddo howlaheeda shaqo ayaa timid maalin kadib markii la geeyay isbaarooyinkii ugu horeeyey ee xabbad-joojin lagu sameeyo Khamiri, Kilo 8 bari ee magaalada Hodeidah si loo yareeyo kororka iyadoo la raacayo habka xabbad-joojinta ay labada dhinac kala saxiixdeen, iyada oo hoos timaad Qaramada Midoobay bishii Disembar ee la soo dhaafay.
Waxaa loo qorsheeyay in la geeyo dhibcaha labaad ee indha indheeynta, maalinta Axadda, magaalada Saleh, iyo in la geeyo dhibcaha saddexaad maalinta Isniinta ee aagga Kilo 16 bari ee magaalada, iyo in la geeyo dhibcaha afaraad goobtii koonfurta magaalada.
Previous articleWefti ka socda Midawga Yurub oo gaadhey somaliland+sawiro
Next articleWasiir Beyle” Waxaa noo soo gaba gaboobay shirarkii Sanadlaha ahaa ee Bangiga Adduunka iyo IMF,”
Kheyre oo la kulmey wasiirka arimaha dibada Ruushka